खाद्य "जादुई गोली": वर्णन, विशेषताहरु, समीक्षा मालिक
भान्सा उपकरण को निर्माता आफ्नो उत्पादन व्यापक कार्यक्षमता र प्रदर्शन endow गर्छन। वास्तवमा धेरै पाक सञ्चालन प्रत्येक अन्य पूरक र खाना पकाउने प्रक्रियामा ओभरल्याप किनभने, विश्वव्यापी साधन को उपलब्धता Housewives लागि एक राम्रो उपकरण बन्दछ। अभ्यास शो रूपमा, बहुमुखी प्रतिभा सधैं उपकरणहरू को एक किसिम को लागि राम्रो, तिनीहरूले विशेष उपकरण को विश्वसनीयता गुमाउन देखि छ। निर्माताहरू शो एउटा उदाहरण उपकरण जादू बुलेट उल्टाउन निर्णय गरेका छौं। "जादुई गोली" को पकाउने प्रक्रिया सरल बनाउन अनुमति दिने, भान्सा उपकरण धेरै प्रकार को संकर एक प्रकारको छ। मोडेल को मुख्य लाभ कार्यक्षमता सकिन्छ, तर अपरेसन डोमिनियन को एक विस्तृत श्रृंखला लाभ को सूची सीमित छैन। निस्सन्देह, त्यहाँ जो प्रतिक्रिया को उदाहरण हेर्न सकिन्छ कमियां छन्। उपकरण बारेमा आधारभूत जानकारी खडा सुरु गर्नुहोस्।
प्रोसेसर बारेमा सामान्य जानकारी
निर्माण उपकरण6पीस, काटन, मिश्रण, र अरूलाई सहित आधारभूत पकाउने सञ्चालन, प्रदर्शन गर्न डिजाइन। हामी ब्लेंडर, मिक्सर र Juicer ती उपकरणहरू कार्यक्षमता जादू बुलेट खेल्छ छन् भनेर भन्न सकिन्छ। "जादुई गोली" - प्रोसेसर, समस्या र समर्थन समाधान गर्न अनुमति दिन्छ जो। उदाहरणका लागि, यो अल्पकालीन भण्डारण उत्पादनहरु लागि धेरै niches र reservoirs पूर्ण सेट प्रदान गर्दछ।
त्यो छ, छैन मात्र उपकरण तपाईं एक सुविधाजनक सामग्री तिनीहरूलाई प्रदान थप पकाउने प्रक्रिया तरकारी, फलफूल र यति मा। ई लागि तयारी गर्न, तर पनि अनुमति दिन्छ। उदाहरणका लागि, तपाईं पिज्जा लागि सामाग्री तयार गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो उत्पादनहरु उत्पादन र ढिलाइ बिना पकवान थप्न तिनीहरूलाई पीस पछि परीक्षण को आधार बनाउन पर्याप्त हुनेछ। , साधन उच्च गुणवत्ता सामाग्री को छन् एक विचार-बाहिर Ergonomics र एक राम्रो डिजाइन छ - किरा को कटोरे प्रयोग गर्न सकिँदैन प्रोसेसर संग प्रत्यक्ष काम मा, तर पनि एउटा स्वतन्त्र भान्सा बर्तन रूपमा मात्र होइन।
जो को बजार मा विकल्प संग तुलना जटिल किनभने मोडेल, एक Multifunctional उपकरणको रूपमा बनेको छ। यद्यपि, यो "जादुई गोली" छलफल गर्न सकिन्छ एकदम रूपमा पूर्णतया निम्न विशेषताहरु संग संयोजन:
आयाम - लम्बाइमा 27 सेमी, उचाइ 33 सेमी र चौडाई मा 26 सेमी।
वजन - 3.57 किलो।
नेटवर्क पावर आवश्यकताहरु - 240 वाट।
सुरक्षा श्रेणी ग्राउंडिंग - 2।
विकल्प ब्लेंडर - प्रदान गरिएको छ।
ठोस ह्यान्डल गर्ने सक्षम - प्रदान गरिएको छ।
सम्भावित शक्ति - 200 वाट।
निर्माता - चीन।
देख्न सकिन्छ रूपमा, उच्च कार्यक्षमता र राम्रो शक्ति फसल एक कम्प्याक्ट आकार छ। टिप्पण र संगठन सामान लायक। नलिका, कटोरे, र अन्य एडअनहरू "जादुई गोली", व्यावहारिक बहुमुखी र व्यञ्जन एक विस्तृत विविधता सिर्जना संलग्न गर्न सकिन्छ।
मोडेल सकारात्मक पक्षमा विशिष्ट भान्सा उपकरण फरक छ जो एकदम धनी पूरा सेट, छ। त्यसैले, जग सुसज्जित परिक्रमण सदस्य संग आधार छ। मोडेल क्रसओभर र सीधा चक्कु आउँछ - .. यो चार टुक्रा मात्रा, आदि काम वस्तुहरूको सूची समावेश ब्लेड काटन मा कचौरा (उच्च वा कम), पम्प sokovyzhimaniya, पेय कप प्रयोग गर्न सम्भव छ। यो "जादुई गोली" माथिल्लो भाग terminates एक ढक्कन संग SHAKER-steamer टिप्पण लायक छ। Blender पनि सुविधाजनक आवरण संग पूरक भइरहेको, आउँछ। सुझावहरूको लागि रूप, तिनीहरू केवल दुई हो। तर यो उपकरणको पूर्ण उपयोग गर्न पर्याप्त छ। विशेष मा, चुच्चो SHAKER र जहाजहरु प्रस्तावित। पहिले नै उल्लेख रूपमा, निर्माता को दायित्व सामान र सहायक तत्व संयोजन को धेरै प्रदान, यन्त्र को Ergonomics नजिक। एउटै कप दुवै पाक सामाग्री मिश्रण र एक माइक्रोवेव ओवन मा खाना पकाउने लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
के व्यञ्जन पकाएको गर्न सकिन्छ?
व्यञ्जनहरु संग आपूर्ति उपकरण र Cookbook समावेश। सामान्य मा, उपकरणको कार्यक्षमता को पकाउने प्रक्रिया भाग उत्पादनहरु संग विशेष अपरेसन को कार्यन्वयनका लागि मात्र होइन गुमाएको छ। त्यहाँ तेस्रो-पक्ष उपकरण जडान बिना प्रोसेसर पूर्ण पकाउने लागि डिजाइन को "जादुई गोली" को लागि व्यञ्जनहरु पनि छन्। एक क्लासिक नुस्खा - एक पार्टी साल्सा लागि तयारी। एक मिश्रण लागि साना बल्ब, टमाटर, चेरी र मरिच, र लसुन आवश्यक पर्दछ। सबै सामाग्री सानो टुक्रा उत्पादन चोट छन्। प्रक्रिया र मा फोम पकवान स्वाद दिन जो टमाटर देखि गठन गरिएको छ। विशेष गरी संयोजन थपियो मसला र सस संग व्यञ्जनहरु र Mashed तरकारी को एक किसिम प्रस्ताव लागि। खैर, एक ब्लेंडर तपाईं सस र अन्य व्यञ्जन सबै प्रकारका तयारी गर्न सक्नुहुन्छ।
उपकरणको घटक भागहरु को एक ठूलो संख्या जटिल प्रयोग-गर्न-एक मिसिन को छाप दिन सक्छ हुनत, तर वास्तविकता यो होइन। मुख्य प्रयोगकर्ता कार्य - correlating उत्पादन ह्यान्डलिङ वर्ण पाक आवश्यकताहरु, सञ्चालनको सही मोड चयन गर्न छ। अर्को, तपाईं त आधार मा माउन्ट छ जो एक कचौरा, मा सामाग्री राख्न आवश्यक छ। खाद्य फिक्सिंग को सुविधाको लागि "जादुई गोली" तपाईं कन्टेनर को स्थिति को शुद्धता निर्धारण गर्न सक्छन् जो संग विशेष लेबल, सुसज्जित छ। कचौरा तय गर्दा, तपाईं एक कार्यप्रवाह सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। उपकरण मार्गदर्शन वा स्वचालित मोड मा काम गर्न सक्छन्। दबाब रोक्न गर्दैन जब यसको कार्य क्षण सम्म गरिनेछ - पहिलो मामला मा यो इन्जिन सुरु गर्न कचौरा थिच्नुहोस् गर्न पर्याप्त छ। स्वचालित मोडमा, यो पनि जो पछि इन्जिन सुरु लागि यो बारी कप, स्थापना गर्नुपर्छ। प्रोसेसर प्रयोगकर्ताको हस्तक्षेप बिना एउटा सञ्चालनको प्रदर्शन गर्नेछन्।
फसल प्लास्टिक प्रयोग गर्न नमनीय धातु र विश्वसनीय प्रयोग गरे। यद्यपि, यो मूल कार्यक्षमता संरक्षण, अब रहन्छ कि प्रविधि, हेरविचार गर्नुपर्छ। "जादुई गोली" को सर्वोत्कृष्ट राज्य कायम गर्न मुख्य निवारक उपाय - नियमित सफाई र तत्व को निष्ठा जाँच। स्पेयर पार्ट्स पनि बनाइदिन सक्छ प्रतिस्थापन आवश्यकता - यो मुख्य रूप चक्कु संग चिन्तित छ। त्यसैले, तपाईं प्रोसेसर तिनीहरूलाई immersing अघि उत्पादनहरु को विशेषताहरु खातामा लिनुपर्छ।
तपाईं प्रयोगकर्तालाई ध्यान पहिलो कुरा, यो एक सार्वभौमिक उपकरण र गति छ। त्यहाँ प्रोसेसर सम्हाल्न सक्दैन भनेर धेरै कार्यहरू छन्, तर तिनीहरू पाक कला को अर्को क्षेत्रमा ढाँट्छन्। तथापि, कार्य, जो आधुनिक juicers र ब्लेनडर्स मा लिन को दायरा, सजिलै "जादुई गोली" प्रदर्शन। प्रतिक्रियाहरू पनि प्याकेज तपाईं टाढा आधारभूत कार्यहरु परे जान अनुमति दिन्छ भनेर संकेत गर्छ। उदाहरणका लागि, सुविधाजनक कप र मग खाना र ककटेल को आपूर्ति लागि दलहरू मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। हैंडलिंग र मर्मतका वस्तुतः कुनै समस्या संयोजन। गृहिणियां सानो वजन र उपकरणको सरल सिस्टम fixation तत्व जोड।
खातामा एक प्रोसेसर प्रस्तुत जो औसत मूल्य खण्ड लिइरहेको, यो एकदम बुझ्ने शक गुणस्तर सन्दर्भमा ग्राहकहरु छ। र साँच्चै, त्यहाँ चाँडै नै काटन तत्व बिग्रनु कसरी धेरै टिप्पणीहरू छन्। दुर्भाग्यवश, रूस मा "जादुई गोली" को विशेष सर्विसिंग व्यावहारिक अनुपस्थित छ, त्यसैले एक प्रतिस्थापन भागहरु समस्या हुन सक्छ। बहुमुखी प्रतिभा भए तापनि उपकरणको uselessness बारेमा धेरै कुरा। कि, आफ्नो काम गुणस्तर र बहुमुखी प्रतिभा रद्द छैन, तर अझै पनि उपकरण मात्र एक निश्चित पाक आला समेट्छ। उदाहरणका लागि, यो पार्टी सेवा नाश्ता र प्रकाश भोजन तयार गर्न पूर्ण उपयुक्त छ, तर ठूलो परिवारको दैनिक मासु सामग्री अप्रभावी छ।
बजार मा प्रोसेसर एक चमत्कार प्रविधी रूपमा अवस्थित छ। कसरी साँचो यो कथन? केही हदसम्म, उपकरणले "जादुई गोली" साँच्चै राम्रो छ। हुनत कुनै पनि प्रतियोगी को अगाडी मोडेल को कार्यक्षमता र गुणस्तर मामलामा समान उपकरणहरू छन्। र अझै, कुनै प्राविधिक breakthroughs निर्माताहरू प्रस्ताव छैन। तिनीहरूले एउटा मात्र धेरै उपकरणहरू साथ दिए। को संयोजन को स्पष्ट र indisputable लाभ ठीक लाग्यो-बाहिर उपकरण कार्यात्मक मात्र छ, तर Ergonomics मा पनि श्रेय गर्न सकिन्छ। साथै, यो आधुनिक भान्सा मा मान छ जो यन्त्र, को मूल डिजाइन र compactness टिप्पण लायक छ।
विवरण, फोटो: प्रकार MDF र chipboard बनेको भान्सा लागि countertops
भान्सा लागि मूल पर्दे - आफ्नो हातमा!
रेडियोबिना "ARISTON" - को परिवारमा एक विश्वसनीय सहायक
को अंगीठी ग्यास चुलो सुझाव कसरी धुन
Horeca चयन: नयाँ पुस्ता को बिजुली मासु Grinder
Thermo: यो के हो?
Hyperactive बच्चाहरु। आमाबाबुले के गर्नुपर्छ?
क्लब "क्रिस्टल" (Kemer): विवरण र लाभ
पुस-अप कसरी गर्न
एलसीडी-टिभी Vestel प्रविधिको नयाँ स्तर पुग्छ
महिला कपडे अनलाइन स्टोर एक विशाल श्रेणी प्रदान गर्दछ!
उचित पोषण, वा के के तपाईं खान सक्नुहुन्छ
राजकुमारी महिला बेरा नतालिया Aliyev: जीवनी र रोचक तथ्य
निलो आँखाहरु लागि एक मेकअप कसरी बनाउने
कसरी अनावश्यक कपाल को छुटकारा प्राप्त गर्न स्थायी वा लामो समय को लागि
लेक Jomtien होटल (पटाया, Jomtien बीच): कोठा, सेवा, को विवरण